Wargeys Naareeye | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ka shaqeynta wargeyska dugsiga waa hawl sannad dhan socotaa oo ay ku jiraan saacadaha xagaaga, gaar ahaan labada toddobaad ee ka horreeya bilowga sannad-dugsiyeedka. Waqtiga ballanqaadku wuu kala duwan yahay, waxayna kuxirantahay doorarka-- kudhowaad 20 saacadood bishii waa mid uqalma tifaftirayaasha, seddex ilaa shan saacadood bishii qorayaasha. Sannad caadi ah, toban arrimood oo joogto ah, 8-20 arrimood oo bog ah ayaa la daabacayaa, iyada oo ay suurtagal tahay in "khaas ah" dheeraad ah.
Iyadoo la raacayo hagista lataliyaha, ardaydu waxay qoraan, wax ka beddelaan oo ay soo saaraan warqadda. Neefsadu waxay maareysaa miisaaniyad waxayna ku uruurisaa lacagaha iyada oo loo marayo xayeysiinta. Shaqaaluhu wuxuu kakooban yahay ilaa 15 tifaftire, 30 qoraayo shaqaale ah, farshaxanlayaal, sawir qaadayaal iyo xubnaha kooxda xayeysiiska ah. Waxa kale oo jirta fursad marmar, qoraa wax ku biirisa. Dhammaan jagooyinka (marka laga reebo qorayaasha wax ku biiriya) waxaa lagu buuxiyaa nidaamka dalabka.
Shirarku waxay ku yaalliin Xafiiska Breezes ee dugsiga sare (2420-A), shaqada oo dhanna waxaa la qabtaa ka hor ama ka dib dugsiga ama waqtiga ardayda u gaarka ah dhammaadka usbuuca. Ardayda xiiseyneysa inay ka shaqeeyaan warqadda waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay iska diiwaangeliyaan suxufinimada oo ka mid ah koorsooyinka ay doortaan.
Eeg Nuqulkii Ugu Dambeeyay ee Neecawda